Nzukọ na nkeji | Holmbygden.se
Ebe a na ị ga-ahụ na ogbugba ndu na ozi banyere nzukọ.
The ogbugba ndu na-echekwa “pdf-format” ma ọ bụ “okwu-format” na-emeghe na a ọhụrụ window mgbe ị pịa ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata a akwụkwọ, nri pịa ma họrọ “Save Target Dị…” (ma ọ bụ Ẹkot na ihe nchọgharị gị).
Iji na-agụ PDF akwụkwọ gị mkpa
nke Acrobat Reader (download ebe a).
HBU F / T onyinye nzukọ
120313 Nkeji nke Nzukọ Kwa Afọ (abụghị gbanwee).DOC
Holm Echiche nzukọ maka a bi Holm
Ịlanahụ ọzụzụ Thomas Åslin ẹkenịmde n'ihu Christmas sere a ọtụtụ ndị na bụ a rite uru dị ukwuu maka nche nke Holm. Nwere ike ịbụ a ọzụzụ afọ a.
Wind tobaim bu n'obi obodo ego Holm ekwu n'ihi na ndị bi. Ọ na-na kọntaktị na ha na-ekweta, n'etiti ndị ọzọ. ụzọ Nötåsen esibuak. Atụ poolu bibie na February na-ewu ụlọ ga-. Ọ bụla azụmahịa mkpakọrịta nwere ike na-eche na anyị ga-ahụ ihe ụdị nzukọ kacha mma ruru eru na-enweta ime òkè. The onyinye ga-abụ ihe ọ bụla na-erite uru dum district.
Ozi na ọnọdụ Senior Home na Onye Ozizi Housing.
ọ na-efu naanị 30 SEK ka a akpa ihe oriri hemkördfrån ICA Lidén via servicelinjen. Mụta ihe banyere otú ime nke a.
Tommie ndenye Bjorn Nordling – Mittlandia na-abịa na-ekwu okwu banyere Onye Ndú oru (ala Bygdsiljum bidrag). Ọ pụghị ịga taa. Ịgbalị ọzọ.
Macken na-na-adịgide adịgide-emechi. Wee na ime nhọrọ / mgbazinye-atụle!
Onye Ndú oru tụlere dị ka ihe ngwọta na-akwọ ụgbọala a plurality nke dịkọrọ ndụ ọrụ na ebe ka ihe atụ. azụmahịa / Mack, mgbasa brọdband / telephony, biri n'ime (m.h.a. Heico Basten). Nkenke eme na mpaghara 30 % na-akwụ ụgwọ na-enweta ike nke support enyem. 30 %-ndị na-eri nwere ike kpọrọ ọrụ afọ ofufo. N'ike mmụọ nsọ si ọzọ na oru ngo pụrụ ịchọta landsbygdsnätverkets projektdatabas.
aro na o kwere omume. ọmụmụ ma ọ bụ ihe ọmụma nnweta si Alby na Ljustorp otú ha na-agba ọsọ petrol ojii / shop.
Funny na a ọhụrụ Na-amụ ije ezinụlọ anyị kwagara Holm. Kwesịrị igo nke Lars-Åke Sundberg. More efu ụlọ na-ume-agbalị ịgbazite si, na-eche free ezinụlọ ya na ụmụ. A ezi ụzọ “Ilu-uche” na mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. ike ịzụta.
Lee obibi maka ire ere na mgbazinye.
Site ad atụmatụ maka NEW na kalenda amalitela ga-eji, efe ara!
ụgbọ ala tours tụlere. More gaa ugbu a karịa 2008, ọ bụ ezie na nta bi. Ọ na-aga otu nọmba kwa ụgbọ ala Kovland si Indal Lidén ka Holm. More agadi gaa ugbu a Holm ụgbọ ala obodo, maka zụọ ahịa na Birsta M.M.. ebe ọ bụ na naanị efu 100SEK / ọnwa (!!) ha na-agba ịnyịnya na ụgbọ ala na dum obodo. Mkpebi na-ekwe omume. turändringar ga-anyị. Funnily ezuru, chọrọ County Council chọrọ bee azụ 30% na ụgbọ ala, mgbe obodo chọrọ okpukpu abụọ ọha iga 2020. Ezi nkwado centrally, e nwere ihe ime obodo na Holm. Gụọ ihe banyere n'ụzọ Holm-Sundsvall.
Comments ma ọ bụ ändingsförslag na ụgbọ ala / ụgbọ ala ugboro na-mgbe na-anabata underlines Tommie na-agba ọsọ dị anya; tommie@trapatronen.se .
Lidén akwụkwọ akụkọ, nke a na-ebipụta na Holm, na-arịọ maka ihe ihe n'ihi na ihe na-eji ọṅụ nakwere ihe aro site Holm page.
The ice e kwesịrị gbarụrụ na afọ, ma ugbu a, ndị na-ahụ maka arịrịọ ma amalitela flushing. E nwere ụmụaka e ịga n'ihu nke ice bụ friji na ugbu a na-enwe nwekwara “skate disko” on Friday n'abalị n'ihi na nnukwu ma ọ bụ obere!
Ọ nwere na nso nso na-ede ede na soundtrack na Holm maka ihe na-abịa nkiri ntọhapụ. N'ike mmụọ nsọ e si mara mma gburugburu ebe obibi na elu ebe a.
Jessica Falk ya onwe ya na-eke ndị soundtrack.
Next Holm-nzukọ oge / ụbọchị na-erubeghị kpebisiri, -ahụ n'okpuru.
Na-eme ka ịga ọmụmụ ihe ọzọ:
– Tommie ịlele ọzọ na Bjorn Norling ma ọ bụrụ na mgbe ọ nwere ike na-abịa ọmụmụ ihe ọzọ nke oru ngo ndú na-ekwu banyere onye ndú, mgbe anyị na-ekpebi oge na ụbọchị.
– Janne Vinroth ego ngwa ngwa na Alex ma ọ bụrụ na ọ bụ omume na mgbazinye ọdụ / mgbapụta ruo n'ihu mara. Ihe mbụ nzukọ na n'ọdịnihu dị nso nwere ike ịdị mkpa na a.
– Niklas nwetara mbụ nwere mmasị, Janne, nke ụlọ ahịa na-egosi mmasị anyị.
– Gunilla okwu na ICA Kovland nke mmasị Holm Hall dị ka alaka ụlọ ọrụ.
– Niklas fixes ihe echiche-igbe na Holmbygden.se ebe ị nwere ike mfe dee aro na ihe kwesịrị ka a mere na Holm.
Onye na-akpakọrịta na ICA Kovland mmasị ICA Holm ulo.
Kaiser chiefs Loviken eche na ọ bụrụ na ọ bụ omume na-gbaziri AED na Gimåfors ihe. Ee, ọ ga-enwe obi ụtọ na-ebe ọ bụ ọrụ n'aka. Olle Frisk nwere atụmatụ maka a ntọala / enweta ego inye defibrillator na ego jikọrọ nke a.
16 December, ya ọzụzụ na Thomas Åslin banyere ọhụrụ SMS lifesaver.
Ifufe tobaim e-atụle n'ihu.
HBU ga-a nzukọ banyere. aku compound tinyere ifufe tobaim s.c.. wuru peng.
Anyị ga na-agbalị na-agba Bjorn Norling, mittlandia banyere leaderprojekt na Holm.
Kalenda dị na holmbygden.se/kalender ebe niile mkpakọrịta na-etinye nzukọ na-eme. Ị pụrụ ịhụ na kalenda dị ka ọ na-adịghị na-akwadoghị ndị ọzọ na-akpakọrịta ná nzukọ na-eme tupu ya etinye n'ime.
Mkpa ofu telephony, a nche. The obodo na ibu ọrụ. nche mkpu.
Bad image of Holm Österström na ndị ogbenye na nkwurịta okwu na netwọk na Internet. Ndị comviq n'etiti ndị ọzọ. nwere ogbenye mkpuchi elu ebe a. Ọ ga-ekwe omume inwe a mma nkwurịta okwu?
Tommy anya elu na leaderboard oru ngo.
Janne vinroth anya n'elu aku mkpakọrịta ọjọọ ngwaọrụ. wuru peng.
Gunilla okwu na ICA Kovland nke mmasị na ICA Holm ulo
Lars-Göran akpọ ICA obere ọjọọ ngwaọrụ. Ịtụ nri na-esi Holm.
Next nzukọ: Wednesday 16:na januari kl:19.00 on Österström.
Previous nzukọ: Gịnị na-eme n'ụlọ akwụkwọ taa?
Elu Hans-Olof Sandstrom kwuru na ọ na-ekwu ka ihe niile nne na nna (anaghị - bụghị Patrik eg) na onye ọ bụla ụtọ nwere ụmụaka nọ Lidén. Obodo mbipụta na-atụle n'ihu.
Previous nzukọ: Na-Österström district mkpakọrịta nọgidere? Ọ ga-a mgbatị na Österström?
Ọ dịghị otu mgbakọ na-anọgide taa. Billy osimiri si nedervåning, ga-onwe ulo, Facilities zubere n'èzí - niile Holmbor. More ozi na Holmbygden.se/foreningar/osterstroms-bygdegardsforening/.
Bagarstugan ịnọgide na compound maka mgbazinye.
Previous nzukọ: Akwụkwọ ọkwa banyere website na-enwe nzukọ a ga-mere na-etinye na mailboxes gburugburu Holm. Akwụkwọ ọkwa e dere site Niklas, zigara Patrik site Anders ("Enyefetu enyi") Ofu dum ebi akwụkwọ 500st. akwụkwọ ọkwa nwere 121121 kemgbe oge na-ekesa site na Gimåfors ka Anundgård. Ingela, Kent Å, Catarina na Kent n'ihu na-enye dividend N.
Previous nzukọ: Akpọ na Holm! Anyị ga na-agbalị iji ihe bụ na obodo taa anyị mkpa anyị. Niklas bịanyere aka na akwụkwọ ọkwa, nke e / ga-ekesa.
Previous nzukọ: Anyị nwere ike idozi a hearty picnic na Sjöändan na nrutu na iji Holmsjön.
Catarina / Kent adịghị nwetara jide mkpa Transport Agency, ga-alaghachi. Otú ọ dị, i nwere ike ịhụ ọdọ ... bụ ya n'ezie na ezi ọhịa party ekpe?
Previous nzukọ: Gịnị bụ elu na petrol mgbapụta. Alexander yiri ka chọrọ ka Bibie nke mgbapụta? Ndi-ekwu na PEMA maka refueling. Ọ bụghị-ada ka ha chọrọ iweghara "gas ojii". Mma ma ọ bụrụ na onye / mkpakọrịta chọrọ iweghara. Ịmepụta a obodo nkwu / ekwenye? Mfe iji nweta ego onyinye dị ka. Gịnị ka mgbapụta nwere taa? ike, kortautomat m.m.?
JANNE ndenye Alexander otú ọ na-arụ ọrụ ugbu a:
Ọ bụ eziokwu na Alexander chọrọ tufuo ya. Ọ chọrọ ịbụ, Otú ọ dị, na-ere friji, compressors, wdg. mgbe mgbapụta. Anyị na-atụle nhọrọ dịgasị iche iche.
Ihe atụ nke takeover si Sollerön, Dalarna. A nlereanya ka anyị?
Lee otú ha na mere na protruding notch arịlịka ma Sörbygden?
Kent ịlele n'ihu na PEMA ...
Previous nzukọ: Thomas achọpụtazi na Ljustorp otú ha na-agba ọsọ mgbapụta na ụlọ ahịa a mkpokọta nlereanya.
Agwara a mbụ otu, a obodo mkpakọrịta nwere ụlọ ahịa na ndị niile Ngwa (friza, kyl wdg). Mgbe ahụ, ha dọwara si a na-azụ ahịa na-agba ya. Ebe a na Holm, ọnọdụ a obere dị iche iche na a onwe onye nwe ihe onwunwe, mgbe chọrọ na-ere friza o ngwa nju oyi mgbe gas ojii.
Lower peerolu ụtụ isi na Holm maka ụfọdụ ụlọ ọrụ p.g.a. ọ bụ na ndị na-akwado ebe (asaa, flights na tagzi ahụ nọ iga). Janne nwere ọfiọrọ mbụ na tagzi Operations. Niklas ede na ụlọ ọrụ na website na-akpali oru na Holm.
Gäddhänget na Stugun mbụ ... 4 lag, afọ mgbe 125 lag. Ndị dị otú ahụ iwu ga-enwe ike na-arụ ọrụ ebe a na, karịsịa na ọhụrụ ezi ramp gburugburu ọdọ.
Anyị mkpa iji nweta mma ozi ọma na akwụkwọ na internet Holm.
TV nkiri e mere Ogwe osisi ke ndaeyo. dị?
700 € na njem na ụgbọ mmiri M.M.. si Poland.
na. ifufe: USB ka a dọtaworo Lövåsen si Lidén. Tankị maka mgbasa na-eme n'ọdịnihu bụ. Obodo Peng tụlere.
EULOS adia ngo si Vinbolaget.. Ọ dịghị mbak ga-eresị. EULOS nwere mmasị na kọntaktị na ndị obodo ahụ na-na-enye anyị byapengen ozugbo enweghị obodo ka intermediaries. Jide n'aka na anyị na-arụkọ ọrụ na-adịghị na-asọrịta mpi n'etiti klọb na Holm.
Ọ bụghị dị ka ọtụtụ nkwa taa ịnọgide na-eduga ná maka skuuta. Ka ndị mmadụ na-adịghị abịa ma na-aga snowmobiling na otu ruo n'ókè. Ọ dị mwute na.
ntụrụndụ Atụmatụ! Iji atụrụ rink now Lillsjön na Anundgård Lake.
Ga-Lucia ememe 13:e na Stockholm Cathedral.
Julaktion na parish ụlọ na izu abụọ. Ọbụna ihe Ama na nchedo nke mberede na backwoods. gbasara obi Njide E Jidere (SOS ọrụ kpebie) mberede okporo ụzọ, ọkụ na mmiri na-eri (RTJ esịtidem iwu kpebie) emekọ site SMS na backwoods. (Ljustorp, Holm, Överturingen, North Hazel na Magpie ikpe ebe).
Heico Basten, biri n'ime ndụmọdụulo ke Stöde (Sitere Netherlands), na-ekwu banyere ya ụlọ ọrụ Destis na ha ohere. Driver na nkwado district imekọ ihe ọnụ site a socalled. Leaderprojekt. The chọọchị bụ oru ngo nke. 2 ezinụlọ kwagara n'ime, 3 fam. bụ banyere, 1 anyị. N'oru emigrants, n'etiti ndị ọzọ. a. via EU:ndị kasị ibu Mbugharị ngosi na Holland, saịtị, communities.IT nkà chọrọ na Sundsvall. Ọtụtụ chọrọ na-arụ ọrụ na obodo, ma nọdunu obodo. The anya ka obodo bụ enweghị nsogbu ha ikpe. Ọ bụghị dị ka ọtụtụ jikwaa ire ụlọ ugbu a na Holland, ma ọtụtụ mkpa ọrụ. The mma bụ eke na livskvalitét.Ett imekọ ihe ọnụ na Heico na ụlọ ọrụ ya Destis ga-erite uru Holm. Ego na-achọrọ, Otú ọ dị,. A Ndú oru ngo nwere ike malitere. Ọ na-achọ nkwa na-. Bjorn Norling, Mittland, nwere ike ịgwa gị ihe na mara otú ọ na-arụ ọrụ.
Jide n'aka onye ọ bụla Association ga na ya na-esote nzukọ.
HBU F / T - Holm district mmepe Företagand na Tourism - Erica echiche ọjọọ (Janne kọntaktị)
Holm si Sports Club - jiri Eliasson (Thomas kọntaktị)
Holm si Obodo History Society - (Thomas kọntaktị)
Draka The ugwu n'obere ụgbọala club - Motorcycle na n'obere ụgbọala - Jan-Erik Nilsson (Kent)
Vike uru ahia mkpakọrịta - Holger Sahlin (Max)
Österströms Bygdegårdsförening - Carina Hultman (bịa?)
Sandnäset - Diane (Pọntọs)
Fiskevårdsområde - Stefan Maina (Pọntọs)
Council of Churches - Ulla Grelson (bịa?).
Next Ụbọchị 5:December na 19:00, Församlingshemmet. Gunilla ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ị gbaziri akwụkwọ, Nhọrọ Församlingshemmet. Gunilla ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbụ na akwụkwọ, Nhọrọ Församlingshemmet. Niklas ọkwa ọmụmụ ihe ọzọ na website na via e-mail.
The akwụkwọ taa? Ke adianade do, ugbu a na-ajụ oyi p.g.a. a onye nkụzi na-efu. Right now, enweghị nwa ndabere Otú ọ dị, eme ka ọ na achọghị ịzụ skolort kasị mma n'oge a. Ihe anyị maara bụ na anyị mkpa karịa ụmụaka (!) na-ụlọ akwụkwọ na-agba ọsọ na àgwà.
Anyị kwesịrị ịgbalị chọta "anyị ihe" na Holm. Ikekwe otu warara ebe na profaịlụ anyị, n'ụzọ ụfọdụ t.ex. Näsåker nwere Urkult ememme ma na-etinye ha district na map.
Anyị kwesịrị ịdị na mma na na-arụ ọrụ megide nkịtị mgbaru ọsọ nke obodo, ọ na-emepụta cohesion na Holm.
Nwere ike anyị na-eme ndokwa a kwa afọ byafest na a dịtụ warara na-elekwasị anya. T.ex. a obodo ememme.
Nwere ike a oyi ndokwa ka ihe? Nweta ọrụ n'aka ụbọchị, oge nke afọ, N'adịghị ka okpomọkụ. Echiche maka e.
Holm Cup dị ka ọ na-wetara ole na ole ndị mmadụ - kacha egwuregwu. Mma na Little Holm Cup, ọtụtụ nne na nna. Otú ọ dị, dị nnọọ asọmpi na ndị ọzọ iko. Boules asọmpi ẹkenịmde n'oge okpomọkụ arụ ọrụ nke ọma na ndị ọbịa na ojiji nke nri mmanya.
Na-Österströms district mkpakọrịta nọgidere? Ọ ga-a mgbatị na Österström? Enyocha ịga ọmụmụ ihe ọzọ.
Ụfọdụ ka na-amaghị ma ọ bụrụ na Holmbygden.se. Akwụkwọ ọkwa ga-mere na-etinye na mailboxes gburugburu Holm. Flyer ka a mere iji kwalite Holmbygden.se na ịga ọmụmụ ihe ọzọ. ndị a tọrọ na mailboxes.
Kasị kwaga Deep Pipe ịmara. Olee otú ọ bụ? Ndị mmadụ kwesịrị inwe mmasị n'ebe Holm district n'ozuzu nwekwara.
Akpọ na Holm! Anyị ga na-agbalị iji ihe bụ na obodo nta taa anyị mkpa anyị, t.ex. ọkwá nkà, kapet n'ígwé, na-ese, Österströms Estate. Ulo oru na Holmbygden.se/foretag. More na-nnọọ ka tinye ya ebe free! Ga skrivaa na akwụkwọ ọkwa.
Okporo osisi e goro n'ime obodo na ha nweworo ebe a. Ga-now-akpali azụ Poland, ma nwere mmasị ịnọ na Holm. A ọhụrụ ga-akpali n'ebe ugbu a. E nwere mkpa iji mee ka ọ dịrị ya mfe ịgbazite na Holm. Ọ na-adọta ndị mmadụ n'ebe e mesịrị ogbo ibu na-adịgide adịgide bi.
E nwere mgbe a kwụ n'ahịrị na e nwere mgbe mmasị ịkwaga na "The ọhụrụ Mee". E nwere mkpa maka mgbazinye ụlọ. Ewoo na "Senior home" na "Onye Ozizi Housing" na-mismanaged.
nwere ike anyị idozi a mkpari izu ike na Holmsjö n'isi na nrutu na iji Holmsjön - "Gateway ka Holm". Gwa ndị iga ngalaba ma ọ bụrụ na ọ bụ dịkwa mma iji mụbaa crossroads ebe ama nnọọ nza dị. Nwere ike ị ga-esi a onyinye a site n'ógbè ọchịchị. Nlele na Okporo Authority nke ohere ịga ọmụmụ ihe ọzọ.
Ọ dịghị ihe na ihe anọwo na Affär'n maka ire. Nketa oke Otú ọ dị,, ma ọ dịghị ihe na-abịa nke a shot.
Ọnọdụ nke mmanụ ụgbọala mgbapụta tụlere. Alexander chọrọ ka ya, ma ọ bụ mkpa onye ọzọ na-elekọta ya? Kollas elu maka ọmụmụ ihe ọzọ.
Anyị kwesịrị ịgwa Ljustorp banyere otú ha na-agba ọsọ ha mgbapụta na ụlọ ahịa dị na a mkpokọta nlereanya. Ilele kọntaktsị na Ljustorp maka Agụụ nzukọ.
HBU si dokumentsamling (maka nduzi)
Gụọ akwụkwọ na nkeji nke nzukọ (emepe na ọhụrụ window).
1. Banye na Google mbanye na gị Google Account.
2. Mgbe ahụ, pịa na “Nnwekọrịta na m” n'aka ekpe chọta HBU si nchekwa.
Ike abanye na! Ne Google Account!
Na-gị email Gmail gị na akpaghị aka nwere a Google akaụntụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ya, ime a Google akaụntụ ebe a, ewe naanị 2min!
mgbe ahụ, pịa “M na-ahọrọ iji m ugbu a email address”, i nwere ike iji gị ugbu a email address ka a Google Account enweghị eke ọhụrụ Gmail adreesị.
8/9: Mee ka gị na nụrụ olu ...
22/8: Indals Ọ BỤRỤ na - Holms ...
Previous ozi ọma na NEWS wijetị Họrọ net October 2018 (1) September 2018 (4) August 2018 (1) July 2018 (5) June 2018 (6) Ka 2018 (6) April 2018 (2) March 2018 (2) December 2017 (2) July 2017 (2) June 2017 (1) Ka 2017 (4) April 2017 (2) March 2017 (4) February 2017 (4) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (1) September 2016 (4) June 2016 (5) Ka 2016 (5) April 2016 (3) March 2016 (6) February 2016 (4) January 2016 (2) December 2015 (3) November 2015 (4) October 2015 (1) September 2015 (5) August 2015 (4) July 2015 (4) June 2015 (3) Ka 2015 (7) April 2015 (4) March 2015 (4) February 2015 (4) January 2015 (8) December 2014 (3) November 2014 (4) October 2014 (5) September 2014 (3) August 2014 (4) July 2014 (2) June 2014 (6) Ka 2014 (5) April 2014 (8) March 2014 (11) February 2014 (4) January 2014 (7) December 2013 (12) November 2013 (12) October 2013 (10) September 2013 (9) August 2013 (15) July 2013 (13) June 2013 (18) Ka 2013 (17) April 2013 (13) March 2013 (11) February 2013 (7) January 2013 (13) December 2012 (9) November 2012 (9) October 2012 (6) September 2012 (10) August 2012 (10) July 2012 (4) June 2012 (11) Ka 2012 (10) April 2012 (4) March 2012 (7) February 2012 (6) January 2012 (3) December 2011 (3)
9/12: Utah: Warning klas 1, snöfall, V... I de västra delarna, under morgonen... GỤKWUO
Torra vägbanor med inslag av fläckvis isiga parti... GỤKWUO